Maayarka Hargeysa oo ka qeyb galay shir si weyn loogu faaqiday nidaaminta Suuqa dhexe ee Magaaladda | Somaliland.Org
Maayarka Hargeysa oo ka qeyb galay shir si weyn loogu faaqiday nidaaminta Suuqa dhexe ee Magaaladda
February 28, 2012	Hargeysa (Somaliland.Org)- Maayarka Caasimadda Eng. Xuseen Maxamuud Jiciir, maanta ka qeyb galay Shir balaadhan oo lagaga hadlayay nidaaminta bilicda suuqa dhexe ee Hargeysa iyo habaynta ganacsiga suuqaasi oo lagu qabtay xarunta dawladda Hoose ee Hargeysa.
Shirkan waxa kale oo ka soo qeyb galay Xoghayaha fulinta dawladda hoose ee Hargeysa Mawliid Waris Cabdilaahi, Xildhibaano ka tirsan Golaha deegaanka Hargeysa iyo Ganacsatada suuqa Waaheen ee magaaladda Hargeysa.
Maayarka Caasimadda Hargeysa Eng. Xuseen Maxamuud Jiciir oo furitaankii shirkaasi ka hadlay ayaa ka warbixiyay qorshaha ay dawladda Hoose iyo Gudida bilicda ee heer qaran ay ku doonayaan inay wax ka qabtaan bilicda caasimadda iyo suuqyada Hargeysa.
Eng. Xuseen Maxamuud Jiciir wuxuu u soo jeediyay Ganacsatada suuqan dhexe inay dawladda Hoose kala shaqeeyaan nidaaminta suuqa waxaanu tilmaamay inaanay u dul qaadan doonin cidhidhiga ay ganacsatada yar yar ee guur-guurtaa ku hayaan jidadka magaaladda.
Shirkaasi waxa maamulka dawladda Hoose iyo Ganacsatadda Suuqaasi ay isla qaateen go’aamo ay ka mid ahaayeen in wadooyinka laga mamnuuco ganacsatada yar yar kaaryoonka dushiisa ku guurguurka, in miisaska dibadyaalka ah, in Ganacsatadaas yar yar loo asteeyo goobo gaar ah oo ay ku shaqaystaan.
Waxa kale oo shirkaasi qodobadii ay labada dhinac isla qaateen ka mid ahaa in la habeeyo biraha laydhka iyo isgaadhsiinta ee cidhiidhiga geliyay suuqa, in meheradaha wadada ku dhowi ay hortooda dhigaan mar-mar isku nooc ah.
Shirkan waxa lagu magacaabay Guddi farsamo oo iskugu jirta Dawladda Hoose iyo Ganacsatadda Suuqaasi kuwaasi oo ka hawl-geli doona sidii loo meel marin lahaa qodobadan lagu heshiiyay.
Xubno ka ,mid ah Ganacsatada suuqa dhexe ee magaaladda Hargeysa oo shirkaasi ka hadlay ayaa balan qaaday inay ka shaqeynayaan fulinta heshiiskan isla markaana ay maamulka dawladda Hoose ee Hargeysa ka gacan siin doonaan nidaamin lahaa suuqaasi.
Dawladda Hoose ee Hargeysa ayaa bilihii u dambeeyay qaaday olaleyaal joogto ah oo ay ku doonayso inay wax kaga qabato bilicda magaaladda, waxaanay todobaad kasta hal mar ay suuqyada Hargeysa ka fuliyaan hawl-gal lagu banaynayo jidadka ay xidheen Ganacsato yar yar oo miisas iyo kaaryooneyaal wax ku iibiya.
Waxa kale oo ay dawladda Hoose dedaal weyn gelisay dhinaca wadooyinka shanta degmo ee Hargeysa iyadoo ay samaysay kontomeeye waddo oo iskugu jira kuwo cusub iyo kuwii hore oo la dayac-tiray.
Previous PostKu simha Madaxweynaha Somaliland Oo Qaabiley Sh. Shariif MakididiNext PostW/Macdanta oo shirkadaha Biyo soo saarka ka dalbatay inay ogolaansho ka haystaan wasaaradda	Blog